eTurboNews imi emva kwenkululeko yeendaba nooPEN Belarus
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zeBelarus Breaking » eTurboNews imi emva kwenkululeko yeendaba nooPEN Belarus
Iindaba zeBelarus Breaking • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
39 imiz efundwayo
Umphathi we-PEN America u-Suzanne Nossel uthe oku kulandelayo :: Xa urhulumente ethulisa kwaye ebanyathela ababhali bakhe, utyhila inqanaba lehlazo nokubola iinkokeli ezijolise ukuzifihla, kodwa endaweni yoko zibhenca kuphela. Iinkokheli zeBelarus zinokucinga ukuba zinokuyicinezela inyani ngokuvala umlomo abo banobuganga bokuyixela, kodwa ibali lokuthanda kwabantu kunye nenqanaba lengcinezelo ekhohlakeleyo iya kufumana indlela eya kwihlabathi. Simi kubumbano nababhali be-PEN Belarus kwaye sizimisele ukuqinisekisa ukuba amazwi abo abalulekileyo ayaviwa kwaye amalungelo abo okuzibonakalisa angqinelwe. ”
eTurboNews njengoshicilelo oluzimeleyo olume ngasemva kodade wase-PEN waseMelika Umbutho iPEN Belarus.
Icandelo loMphathiswa Wezobulungisa laseBelarus liye lavala umbutho odade we-PEN America u-PEN Belarus. Kuza phakathi kohlaselo kule veki kwiiofisi zemibutho kunye namajelo eendaba.
I-PEN Belarus ifumene isaziso malunga neenjongo zomphathiswa zokuphelisa umbutho kwangolo suku lunye khululwe ingxelo ibonisa ukwanda kokwaphulwa kwamalungelo enkcubeko kweli lizwe.
IPEN America imi kwindawo ekuhlangana kuyo uncwadi kunye namalungelo oluntu ukukhusela inkululeko yokuthetha eMelika nakwilizwe liphela. Siyimela inkululeko yokubhala, siqonda amandla elizwi ukuguqula umhlaba. Umsebenzi wethu kukudibanisa ababhali kunye nabalingane babo ukubhiyozela intetho yoyilo kunye nokukhusela inkululeko eyenza ukuba kwenzeke.
eTurboNews ulilungu le-PEN America.
Ileta yathunyelwa kwi-PEN Belarus ngoJulayi 22 ifundeka ngolu hlobo:
Inkundla ePhakamileyo yeRiphabhlikhi yaseBelarus iqale ityala loluntu kwibango le-Ofisi yoMphathiswa Wezobulungisa kwiRiphabhlikhi yaseBelarus ngokuchasene noMbutho woLuntu waseRiphabhlikhi 'iZiko le-PEN yaseBelarusian'.
Ummeli woMbutho woLuntu weRiphabhlikhi 'iZiko le-PEN yaseBelarusian' kufuneka avele ngexesha elichaziweyo enamaxwebhu aqinisekisa ukugunyaziswa kokuthatha inxaxheba kwityala..
Eyona nto ibuhlungu kukuba andiboni siphelo sayo yonke into. Kukho ucoceko olupheleleyo lwehlabathi laseBelarusian. Batshabalalisa ngokwecebo lobusathana.
Iziko le-PEN laseBelarusian liqokelela ulwazi ngendlela yokumiliselwa kwamalungelo enkcubeko kunye nawoluntu ngokubhekisele kubasebenzi bezenkcubeko.
Ukusukela nge-Agasti ka-2020 ukuza kuthi ga ngoku, besingamangqina kunye namaxwebhu eengcinezelo eziphambili esele zibekiwe kuluntu lonke olukhululekileyo nakumanani enkcubeko ngokukodwa. Eli lixesha elibuhlungu lenkululeko yokuthetha, inkululeko yokuyila, inkululeko yezimvo, njl. Ingxaki kwezopolitiko nakwezopolitiko zibonakaliswa ngokunyhashwa kwamalungelo oluntu kunye nenkululeko, ukutshutshiswa kwabantu abangavumelaniyo, ukucinezela, uloyiko, kunye ukugxothwa kwabaxhasi benguqu.
Olu xwebhu lunamanani kunye nemizekelo esekwe kwingqokelela kunye nokuhlanganiswa kolwazi oluvela kwimithombo evulekileyo, imbalelwano kunye neencoko zobuqu kunye namanani enkcubeko asusela kuJanuwari ukuya kuJuni 2021.
Ngexesha lesiqingatha sokuqala sika-2021, saqaphela Ngama-621 amatyala olwaphulo mthetho.
Inani lolwaphulo-mthetho ngoJanuwari-Juni 2021 lingaphezulu komthamo wamatyala arekhodiweyo unyaka wonke we-2020 (593) (Sithetha ngokuthe ngqo ngamatyala e-2020, ebebandakanyiwe kuphononongo lokubeka iliso kuloo nyaka. Ngelixa siqokelela idatha yamatyala ngo-2021, sikwaqhubeka nokurekhoda amatyala aphosiweyo ukusuka ku-2020. Oko kuthetha ukuba bebengaphezulu.). Kungaphikiswa ukuba uxinzelelo kunye nengcinezelo, ebinamandla ngakumbi ukusukela nge-Agasti ka-2020, kwaye eyaqala ngexesha lomkhankaso wobongameli, khange ibe buthathaka, endaweni yoko ukucinezelwa kukufumana iifom ezintsha kwaye kuchaphazela uluhlu olwandayo lwezifundo zenkcubeko yaseBelarusian. .
Amandla okunyhashwa okwenzekileyo ukusukela ngo-2020:
Ukususela ngoJuni 30, 2021, abantu 526 zamkelwe njengamabanjwa ezopolitiko eBelarus. Inani elipheleleyo lamabanjwa ezopolitiko, 39 ngabasebenzi bezenkcubeko.
UPaviel Sieviaryniec, umbhali kunye nezopolitiko - 25.05.2021 ugwetyelwe Iminyaka esi-7 kwikholoni ephezulu yokhuseleko;
UMaksim Znak, igqwetha, imbongi kunye nombhali wengoma - ebe kwi indawo yokugcina abantu ukususela kwi-18.09.2020;
UViktar Babaryka, umphathi wezobugcisa-06.07.2021 (Izivakalisi ebesizazi xa bekuyilwa isicatshulwa) ugwetyelwe Iminyaka eli-14 kwikoloni elikhuselekileyo;
UIhnat Sidorčyk, imbongi kunye nomlawuli - 16.02.2021 ugwetyelwe Iminyaka emi-3 ye "khimiya" (Ngokudibeneyo, enye yeentlobo zezohlwayo ibizwa ngokuba yi "khimiya", oko kuthetha ukuthintelwa kwenkululeko ngokudlulisela kwiziko loluleko);
Miokola Dziadok, itshantliziyo lombutho we-anarchist, umbhali woncwadi lwentilongo- ebekwi indawo yokugcina abantu ukususela kwi-11.11.2020;
UJulija Čarniaŭskaja, umbhali kunye nososayensi wezenkcubeko-ukusukela nge-20.05.2021 ebephantsi ukubanjwa endlwini (ngaphandle kokubanakho ukuphuma okanye ukunxibelelana nehlabathi langaphandle, ngaphandle kwegqwetha lakhe);
UKaciaryna Andrejeva (Bachvalava), umbhali nentatheli- 18.02.2021 ugwetyelwe Iminyaka emi-2 kwikoloni yezohlwayo;
UAndrej Pačobut, imbongi kunye nelungu le "Union of Poles" - ebekwi indawo yokugcina abantu ukususela kwi-27.03.2021;
UAndrej Alaksandraŭ, imbongi, intatheli kunye nomphathi weendaba - ebekwi indawo yokugcina abantu ukususela kwi-12.01.2021;
UMaryja Kaleśnikava, iimvumi kunye nomphathi weeprojekthi zenkcubeko - ebe kwi indawo yokugcina abantu ukususela kwi-12.09.2020;
Ihar Bancar, imvumi-19.03.2021 egwetyelwe Iminyaka emi-1.5 ye "khimiya";
UAleksey Sanchuk, obetha igubu - 13.05.2021 ugwetyelwe Iminyaka eli-6 kwikoloni elikhuselekileyo;
Anatol Khinevich, bard– 24.12.2020 ugwetyelwe Iminyaka emi-2.5 kwikoloni yezohlwayo;
IAlaksandr Vasilevič, umphathi weeprojekthi zenkcubeko kunye nosomashishini - ebekwi indawo yokugcina abantu ukususela kwi-28.08.2020;
UEduard Babaryka, umphathi wezenkcubeko- ebe kwi indawo yokugcina abantu ukususela kwi-18.06.2020;
UIvan Kaniavieha, Umlawuli wearhente yekonsathi - 04.02.2021 ogwetyelwe Iminyaka emi-3 kwikoloni yezohlwayo;
UMia Mitkevich, umphathi wezenkcubeko -12.05.2021 ugwetyelwe Iminyaka emi-3 kwikoloni yezohlwayo;
Liavon Khalatran, umphathi wezenkcubeko -19.02.2021 ugwetyelwe Iminyaka emi-2 ye "khimiya";
Andéelika Borys, Usihlalo we "Union of Poles eBelarus" - ebe kwi indawo yokugcina abantu ukususela kwi-23.03.2021;
UAla Sharko, umphandi wobugcisa- ebekwi indawo yokugcina abantu ukususela kwi-22.12.2020;
Ales Pushkin, igcisa - ebekwi indawo yokugcina abantu ukususela kwi-30.03.2021;
Siarhei Volkau, umdlali-06.07.2021 ugwetyelwe Iminyaka eli-4 kwikoloni elikhuselekileyo;
UDanila Hancharou, umyili wezibane - 09.07.2021 ugwetyelwe Iminyaka emi-2 kwikoloni yezohlwayo;
I-Aliaksandr Nurdzinau, umculi - 05.02.2021 ugwetyelwe Iminyaka eli-4 kwikoloni elikhuselekileyo;
Uladzislau Makavetski, umculi - 16.12.2020 ugwetyelwe Iminyaka emi-2 kwikoloni yezohlwayo;
UArtsiom Takarchuk, uyilo- 20.11.2020 ugwetyelwe Iminyaka emi-3.5 kwikoloni yezohlwayo;
URastsislau Stefanovich, umyili kunye noyilo-ebekwi- indawo yokugcina abantu ukususela kwi-29.09.2020;
UMaksim Taccianok, umyili - 26.02.2021 ugwetyelwe Iminyaka emi-3 ye "khimiya";
UPiotr Slutski, I-cameraman kunye nenjineli yesandi- ibikade ikwi- indawo yokugcina abantu ukususela kwi-22.12.2020;
UPavel Spiryn, umbhali wesikrini kunye nebhlog - 05.02.2021 ugwetyelwe Iminyaka emi-4.5 kwikoloni yezohlwayo;
Dzmitry Kubarau, Uyilo lwe-UX / UI-24.03.2021 ugwetyelwe Iminyaka eli-7 kwikoloni elikhuselekileyo;
UKsenia Syramalot, Imbongi kunye noluntu, umfundi weFakhalthi yeFilosofi kunye nezeNzululwazi yezeNtlalo kwiYunivesithi yaseBelarusian State - 16.07.2021 ogwetyelwe Iminyaka emi-2.5 kwikoloni yezohlwayo;
Yana Arabeika kwaye UKasia Budzko, abafundi beFakhalthi ye-Aesthetic Education ye-Belarusian State Pedagogical University - 16.07.2021 bagwetyelwe Iminyaka emi-2.5 kwikoloni yezohlwayo;
UMaryia Kalenik, Umfundi weFakhalthi yoYilo loMboniso kwiAkhademi yoBugcisa - 16.07.2021 wagwetywa Iminyaka emi-2.5 kwikoloni yezohlwayo;
UViktoryia Hrankouskaya, Owayesakuba ngumfundi weFakhalthi yoYilo lweyunivesithi yaseBelarusian yezobuGcisa - 16.07.2021 wagwetywa Iminyaka emi-2.5 kwikoloni yezohlwayo;
UIhar Yarmolau kwaye UMikalai Saseu, abadanisi-10.06.2021 bagwetyelwe Iminyaka eli-5 kwikoloni elikhuselekileyo;
Anastasiya Mirontsava, umculi, wagxothwa ukusukela kunyaka ophelileyo, umfundi weAkhademi yoBugcisa - 01.04.2021 wagwetywa Iminyaka emi-2 kwikoloni yezohlwayo.
Okwexeshana, umphathi wezenkcubeko Dzianis Chykaliou unesikhundla sebanjwa "langaphambili" lezopolitiko, kuba ngalo mzuzu ukhululekile phantsi kwemvume yokuba angashiyi ilizwe. Kodwa ekulandeleni isigwebo, uya kunyanzelwa ukuba aye kwindawo evulekileyo yoluleko (ye "khimiya": ugwetywe iminyaka emi-3).
Kwisiqingatha sokuqala se2021, 24 batshutshiswa abasebenzi bezenkcubeko babenjalo ugwetywe ngokungekho mthethweni. Phakathi kwabo bobabini abo babonwa njengamabanjwa ezopolitiko kunye nabo bangenalo le nqanaba. Abasebenzi bezenkcubeko abali-13 bagwetywe yinkundla ukuba a isohlwayo kwikoloni kwisigwebo seminyaka emi-2 ukuya kweli-8 (Abasixhenxe bagwetywe ikholoni elikhuselekileyo), abasebenzi bezenkcubeko abasi-7 - bagwetyelwe Iminyaka eyi-1.5-3 ye "khimiya", 2 abasebenzi bezenkcubeko- bagwetyelwe Iminyaka eyi-1-2 "yokubanjwa endlwini" (isithintelo senkululeko ngaphandle kokudluliselwa kwindawo evulekileyo yoluleko).
“Uphawu” olwahlukileyo kwisiqingatha sesibini sonyaka kukuba abasebenzi bezenkcubeko abagwetyelwe u "khimiya" kwaye kamva bakhululwa ekhaya okwethutyana emva kokubhengezwa kwesigwebo, baqala ukufumana ukuthunyelwa ngoJuni ukuba baye kugweba isigwebo kumaziko avulekileyo. . Ke, ngoJuni, umphathi wezenkcubeko uLiavon Khalatran, imbongi kunye nomphathi u-Ihnat Sidorchyk, imvumi u-Ihar Bancar kunye nomyili we-Maksim Taccianok bathunyelwa ku "khimiya". Inkundla yezibheno zezigwebo ezingekho mthethweni khange zikhokelele kutshintsho kumlinganiso wokubamba.
Kwinqanaba lophando lwethu sigxile kwi iimeko zokuvalelwa kumaziko avaliweyo. Ngexesha likaJanuwari-Juni 2021, sichonge iimeko ezingama-44 ngenkcazo okanye ukukhankanywa kweemeko ajongene nazo amabanjwa. Ezi nkcazo zikhawulelwe kulwazi olufumanekayo kuthi ngamajelo eendaba nangokupapashwa kwezihlobo. Siyaqonda ukuba imithombo yolwazi enqongopheleyo, imbalelwano enzima kwaye ehlala ingekho kumabanjwa, kunye nenkqubo engqongqo yokunyanzelwa kwentolongo ayisivumeli ukuba sibhengeze ukuphelela kolwazi; nangona kunjalo, nangenxa yezibakala ezikhoyo, siphikisa ngelithi iimeko zokuvalelwa zenza, ubuncinci, impatho ekhohlakeleyo nehlisayo, kwaye kwezinye iimeko zibonisa iimpawu zokuhlukunyezwa.
Imizekelo yeemeko zokuvalelwa:
UMax Znak wayidlulisa loo nto wayengekaboni bumnyama iinyanga ezilithoba. Izibane zihlala zikhanya kwisisele sakhe.
Ngexesha lokuxoxwa kwenkundla ngo-Epreli 26, uZmitser Dashkevich wathi "Iimeko ezifanayo zenzelwe abo bavalelweyo kwezopolitiko: amabanjwa ezopolitiko avuswa ngamanye amaxesha ahlukile kwamanye amabanjwa ,, kukho iitsheki ebusuku, ukunqongophala koomatrasi, isimo sengqondo esikhubekisayo kunye nokungabikho kwephakheji."
Iseli eyenzelwe abantu aba-4 ibambe abantu abali-12. UValery wachitha iintsuku ezingama-20 ngaphandle komandlalo nengubo. Iintsuku ezi-2 zilandelelana, amabanjwa ezopolitiko anyanzelwa ukuba aphulaphule ukusasazwa kweNdibano yaBantu base-Belarusian. Ngexesha leentsuku ezingama-20 zokubanjwa kwakhe, uValery akazange athathwe ayokuhlanjwa kwaye akazange afumane iipakeji kusapho lwakhe.
Uhlobo olukhethekileyo lokuhlukumeza unomathotholo, osebenza ubusuku nemini ngamanye amaxesha ebusuku. ”
Umfazi ka-Andrzej Poczobut uthe ukulawulwa kweziko lokuvalelwa kwangaphambi kwetyala akumniki umyeni wakhe iyeza lentliziyo. UAndrei unentliziyo engavumelekanga. Iyeza lahanjiswa kwiziko lokugcinwa laseZhodino kodwa ulawulo aluzange lunike ngqo ePoczobut.
“Akabi sempilweni. Utyheli. Ngamanye amaxesha uyeka ukuba tyheli, abe yinto eqhelekileyo, emhlophe. Emva koko ngwevu, emva koko tyheli kwakhona. Amehlo akhe asoloko ezele bubofu. Imithambo emlenzeni yakrazuka kwaye kufuneka enze utyando okanye imithambo iya kukrazuka. Ukuzaliswa kwakhe kwawa, akanakukwazi ukwenza entolongweni. "
"Ithegi emthubi enegama lakhe kunye nefani yakhe. Ndifuna ukucacisa kwangoko: hayi, eli ayilo phawu lukhethekileyo ngokukodwa kwezopolitiko. Kodwa olu luhlobo lokwahlulwa kwamabanjwa - oko kukuthi, ayingawo onke amabanjwa anxiba iithegi ezityheli, kodwa kuphela iqela elithile elibhaliswe njengeprophylactic ngenxa yokuthambekela kwabo ekubeni "nobugqwirha". Ngendlela, ukwahlulwa okunjalo ayisiyonto intsha-lo mkhuba ubukho ubuncinci ukusukela ngo-2019 ”.
Ngaphambili besikhe sakhankanya ukuvalelwa ngokungenasizathu, ukutshutshiswa kolwaphulo-mthetho, ukugwetywa ngokungekho mthethweni kunye nezinye iimeko- olu luluhlu lwamalungelo anyhashwa rhoqo malunga namanani enkcubeko kunye nabantu abasebenzisa amalungelo abo enkcubeko. Isiphoso (izimvo ezahlukileyo kwezo zisasazwa ngamagosa aseburhulumenteni) sesona sizathu siphambili sokuba abantu batshutshiswe.
Sikwabhale ukwanda kwenani labantu abashiya ilizwe beqinisekisa ukhuseleko lomntu, iimeko zocalucalulo kulwimi, kunye nelungelo lokusebenzisa iimveliso zenkcubeko.
Ingqwalaselo eyodwa kufuneka ihlawulwe ekwandeni koxanduva lolawulo nolwaphulo-mthetho ukusetyenziswa kweempawu zesizwe. Lo mkhuba ukhule kwilizwe lonke. Kude kube ngoku, iflegi emhlophe-bomvu-mhlophe kunye nengubo "Pagonya" khange zibonwe njengeziyingozi, kodwa ngoku abantu babekwa uxanduva kungekuphela ngokusetyenziswa kweflegi kodwa kwanomahluko ekusebenziseni umbala indibaniselwano yeempawu zembali. Ukusetyenziswa kweempawu zesizwe akuyiyo eyona nto kugxilwe kuyo kuphando lwethu, kodwa ngaphezulu kwama-400 amatyala kwilizwe liphela afakwa kwicandelo lethu lombono kuphela kwiinyanga ezintandathu.
Ukuqala ngoJanuwari walo nyaka, izindlu zokupapasha ezingezizo ezaseburhulumenteni, abapapashi, abasasazi beencwadi, oonondaba abazimeleyo, kubandakanya nabo banomxholo kwizihloko zenkcubeko, ababhali, kwaye bahlala befunda ngokwabo, baphantsi koxinzelelo. Ke,
NgoJanuwari abapapashi uHienadź Viniarski noAndrej Januškievič bavalelwa baza bancinwa. Kwenziwa uphando kwizindlu zokupapasha "iJanuskevic" kunye ne "Knigosbor". Iikhompyuter, iifowuni kunye neencwadi zithathiwe. Iiakhawunti zabo bobabini abapapashi, kunye nevenkile yeencwadi ekwi-intanethi knihi.by, zavalwa kwaye zahlala njalo kangangeentsuku ezili-146 (phantse iinyanga ezintlanu) de bavulwa ngoJuni 5.
Ngeli xesha, imisebenzi yezindlu zokupapasha baphantse bakhubazeka, kwaye imibutho ngokwayo yayisongelwa ngokuvalwa: kukho ilahleko, iingxaki ekufumaneni izixhobo zeencwadi ezintsha, kwaye kwakungekho thuba lokuhlawula izindlu zokuprinta.
Indlu yokupapasha "Logvinov" nayo ikwi-hiatus. Ivenkile yeencwadi ivaliwe kwaye isebenza kuphela kwi-Intanethi.
Sisoloko sifumana iindaba zokuba amasiko aseBelarusian akavumeli ukuba kudlule iincwadi ngababhali abathile kunye / okanye nabapapashi. Ke, inoveli kaViktar Marcinovič "Revolution" (umthumeli - knihi.by) ayivunyelwanga phesheya. Incwadi ethi "I-Belarusian National Idea" ebhalwe nguZmitser Lukashuk kunye noMaksim Goryunov nayo khange ifumane abathengi bangaphandle.
Inoveli eprintwe ngokutsha ethi "Izinja zaseYurophu" ngu-Alhierd Bacharevič, owayevela eLithuania esiya kwindlu yokupapasha yaseYanushkevich esasaza iikopi ezili-1000, yathunyelwa ukuba ihlolwe amasiko kunye noviwo lobukho (bokungabikho) kobugwenxa kuyo. Isiphelo asibonelelwanga emva kweentsuku ezingama-30 zekhalenda; Namhlanje ukusasazwa kuye kwaqinisekiswa iinyanga ezintathu.
Incwadi "Belarusian Donbass" nguKaciaryna Andrejeva (Bachvalava) kunye noIhar Iljaš wabhengeza ukuba uyingozi. Isibheno sika-Ihar Iljaš ngokuchasene nokwamkelwa kwale ncwadi njengezinto ezigabadeleyo saliwa- sihleli sikule meko. Intatheli u-Roman Vasyukovich, owangenisa iikopi ezimbini zencwadi kwiRiphabhlikhi yase-Belarus kwangaphambi kokuba ibhengezwe njengeyingozi, wagwetywa kwaye, ngenxa yoko, wahlawuliswa iiyunithi ezingama-20 ezisisiseko (malunga ne- $ 220).
Kwagqitywa kwelokuba incwadi "Umbono weSizwe waseBelarusian" iqulethwe "Iimpawu zokubonakaliswa kweengcwangu". Nangona kunjalo, akukho lwazi malunga nenkundla ethe yagweba ukuba le ncwadi inezinto ezinobungozi kwaye okwangoku le ncwadi ayidweliswanga kuluhlu olusemthethweni lwezixhobo ezibaxekileyo. Nangona kunjalo, kwakuqhubeka ityala ngakubemi bommandla wase Minsk, eJahor Staravojtaŭ [Yegor Starovoitov], owazanywa ukuba abe nale ncwadi, eyayithengwe kwivenkile ethengisa izinto zikarhulumente yaze yathathwa phambi kokuba ifunyanwe inezimpawu “zobundlobongela. ” Ityala elichasene noJahor Staravojtaŭ lapheliswa kuphela ngenxa yokuphela kwexesha lokuzisa uxanduva lolawulo (iinyanga ezimbini).
Elinye ityala lokohlwaywa kwabafundi kukuvalelwa kwabo badla umhlala-phantsi ngenxa “yokuthatha inxaxheba kwizinto ezingagunyaziswanga” - U kufunda Iincwadi ezibhalwe ngababhali baseBelarusian kuloliwe: Nil Hilevich, Yakub Kolas, Uladzimir Karatkievich kunye nezinye ababhali bakudala. Ngexesha lokuncinwa, eli polisa labiza ezo ncwadi loncwadi oluphikisayo.
Sirekhode ukuba iincwadi ezininzi zazikhona Igwetyiwe Kumabonwakude wesizwe. Ezi ziincwadi zikaUladzimir Arloŭ (” UIionion Svabody", Alaksandar Lukašuk ("Iziganeko ze-ARA eBelarus"), Uladzimir Nyaklyayew (" Kon "), Paviel Sieviaryniec (" Umbono weSizwe "), Aleh Latyshonak (" Žaŭniery BNR ")," Kalinoŭski na Svabodzie "kunye" Slounik Svabody "" epapashwe yiRadio Svaboda, ARCHE Magazine nabanye .
Ishishini “Belsoyuzpechat”Ziyekwe unilaterally iikontraki zokuthengisa ushicilelo oluprintiweyo, phakathi kwazo bekukho umatshini oshicilelayo onesihloko senkcubeko kubandakanya iphephandaba" iNovy Chas "kunye nemagazini" uNasha Gistorya ". Ngokukhawuleza emva, IBelpochta Ikwaphelisile ikhontrakthi kolu hlelo, kwaye imirhumo ayisaboniswanga ukusukela ngoJulayi 2021. Ezinye iivenkile ezithengisa iincwadi zikarhulumente nazo ziyekile ukuthengisa.
Kuyaziwa ukuba ulawulo lwe "Belkniga”Basusa iincwadi ngababhali abaliqela ezishelfini zeevenkile zabo: UViktar Kaźko, u-Uladzimir Nyaklyayew, uMarcinovič Viktar nabanye. Inkampani iyiphelisile ikhontrakthi yokuvelisa "Iithiyori zoNcwadi zeNkulungwane yama-20" (incwadi ehlelwe nguLyavon Barshchewski) ngaphambi kwexesha.
Iisetyhula zaqala ukuza kumathala eencwadi zifuna ukususwa kwincwadi yokupapasha malunga nembali yomkhosi, ngakumbi iincwadi ngu UViktar ILakare "Imbali yezomkhosi eBelarus. Amagorha. Iimpawu. Imibala ”kunye" neempawu zomkhosi zamaBelarusian. Izibhengezo neeyunifomu ”. Kuyaziwa ukuba iincwadi zika-Alhierd Bacharevič ziyasuswa kumathala eencwadi aseburhulumenteni.
AMAZIKO OBUGCISA NEMIBUTHO YENKCUBEKO
Ukusukela ekuqaleni kowama-2021, siye sarekhoda imeko ejolise ekudaleni imiqobo kwimisebenzi yeendawo ezizimeleyo zenkcubeko. Olu tyekelo aluqhubekanga kuphela kwiinyanga ezintandathu ezidlulileyo kodwa luguquke lwangumba woxinzelelo olukhulu kule mibutho. Ukucinezelwa kwaqala ngemibuzo yabaphathi, ukugqogqwa, ukufunyanwa kwamaxwebhu kunye nepropathi, kwaye kwaqhubeka ngendlela yovavanyo oluninzi liSebe loPhando lwezeMali, abaHloli beRhafu, iiyunithi zoMphathiswa Wezimo Ezingxamisekileyo, njl. uhlobo olugqithisileyo loxinzelelo - ukupheliswa kwemibutho.
Ekuqaleni konyaka, umnini wezakhiwo wasiphelisa isivumelwano sokuqeshisa kunye ne-Ok16 yeNkcubeko yeHlabathi, ngenxa yoko zonke izinto (ikakhulu zomdlalo weqonga) zaye zarhoxiswa. Emva kwexesha kwaqhutywa kwiziko lezenkcubeko "iDruhi Pavierch" [Umgangatho weSibini] kunye ne-Space KH ("Kryly Chalopa"). Ngo-Epreli, iSebe lezoNgxamiseko kunye nesikhululo sezococeko zeza kwindawo yomnyhadala "Mestsa", ngenxa yoko isiza savalwa de kwaphulwa ulwaphulo-mthetho.
Ibha kunye nendawo yobugcisa Indawo yesiThathu ("Третье место") eGrodno nakwiRed Pub kunyanzelekile ukuba kuvalwe. Iklabhu yomculo yaseMinsk iGraffiti ("Граффити") nayo yaboniswa nemiqobo (iklabhu ivaliwe kodwa kamva yakwazi ukuvula kwakhona). Umnyhadala wobugcisa bale mihla bokuHambisa uMnyhadala wobugcisa warhoxiswa kwaye indawo yobugcisa i-MAF yavalwa ngokupheleleyo.
Ukuqala ngo-Epreli, uxinzelelo kulawulo lwaya luqina kwaye luqala ukuthatha uhlobo olugqithisileyo lwe lomqhubi. Ke, ngo-Epreli 19, iNkundla yezoQoqosho yommandla waseBrest yagqiba kwelokuba iphelise “Isikolo SasePoland” I-LLC ("ukukhusela iimfuno zikarhulumente nezoluntu"). Ngomhla we-12 kaMeyi, iNkundla yezoQoqosho yaseGrrodno yathatha isigqibo sokutshitshisa iziko lenkcubeko kunye nemfundo "iZiko loBomi baseDolophini" (isizathu sesomboniso ka-Ales Pushkin, otyholwa ngokubonisa umfanekiso owela phantsi komthetho wokulwa ubundlobongela.). Ngomhla we-18 kweyeSilimela, oko kwazeka ukuba kwabasemagunyeni eBrest balivala iziko lenkcubeko nezenkcubeko “IKryly Chalopa Theatre” kunye nenkcubeko kunye nemfundo "UGrunt budushchego". Isiseko kukuphunyezwa kwemisebenzi engahambelani neenjongo kunye nesifundo esichazwe kumgaqo-siseko. Nge-30 kaJuni, abasemagunyeni banyanzelisa ukuba bayeke imisebenzi ye IGoethe-Institut kunye neNkonzo yokuTshintshiselana ngezifundo yaseJamani (i-DAAD) eBelarus, imibutho ephambili yokufunda ulwimi lwesiJamani kunye nenkcubeko kwihlabathi liphela. (Ukusukela kwiintsuku zokuqala zesiqingatha sesibini sonyaka, kuye kwaziwa ukuba yi-Arhente yoPhuhliso yeNgingqi yaseBrest "Dzedzich", ebibambe umnyhadala wenkcubeko kunye neminye imicimbi yenkcubeko, icinyiwe).
Enye indlela yokubeka uxinzelelo kwimibutho luhlolo olungacwangciswanga oluvela kwi- Icandelo loMphathiswa Wezobulungisa. Imibutho yoluntu iqale ukufumana iileta malunga nokubeka esweni ukuthotyelwa kwazo kunye neemfuno zomthetho waseBelarusian. Uluhlu lwamaxwebhu aceliweyo lungena kwizinto ezininzi, luchaphazela malunga neminyaka emi-3-4 yomsebenzi wombutho, kwaye iileta ngokwazo zinesaziso sovavanyo oluqhubekayo ziza nokulibaziseka kwiveki, ngenxa yoko kuphela iintsuku ezimbalwa, ukuba akukho lusuku lushiyekileyo lokuqokelela amaxwebhu aceliweyo. Kuyaziwa ukuba loo leta yafunyanwa yi "Belarusian PEN-Centre" kunye "neKomiti yaseBelarusian yeBhunga laMazwe ngaMazwe leZikhumbuzo kunye neeSayithi (ICOMOS)". (Ukusukela kwiintsuku zokuqala zesiqingatha sesibini sonyaka, kuyaziwa ukuba loo leta ifunyenwe yi "Batskaushchyna" kunye ne "Umanyano lwaBabhali base Belarusian"). Ukuphela kukaJuni, kuyaziwa ukuba "iKomiti yase-Belarusian ye-ICOMOS", ilandela iziphumo zophicotho-zincwadi, ifumene ileta evela kwi-Ofisi yoMphathiswa Wezobulungisa ngokukhutshwa kwesilumkiso kulo mbutho ngokunxulumene nokophula umthetho. kunye nesidingo sokuthatha iseti yamanyathelo okuphelisa ukwaphulwa komthetho.
Emuva ngo-2020, "kwabhengezwa imfazwe" kumanyathelo orhwebo awakha ishishini kwicandelo lesizwe (iisimboli zesizwe, izikhumbuzo). Ke, kwezi nyanga zintandathu zidlulileyo, kwaye ikakhulu kwikota yokuqala yonyaka, kuyo yonke iBelarus imiqobo yenziwa kwiivenkile ezithengisa iisimboli zesizwe kunye neempahla: "Kniaź Vitaŭt", Symbal.by, "Roskvit", "Moj modny kut ", Vokladki, БЧБ.bel," Admetnasts "," Cudoŭnaja krama "," Chameleon ", LSTR Adzieńnie, umasifundisane moj rodny kut, iimpahla zoyilo brand Honar. Iivenkile kunye / okanye abaniniyo bahlolwe ngabasebenzi bazo zonke iintlobo zeenkonzo: Icandelo loMphathiswa Wezimo Ezingxamisekileyo, i-FDI, iSebe Lokulwa Ulwaphulo-mthetho Kwezomnotho, iSebe Lokulwa Ulwaphulo-mthetho Oluhlelweyo, amapolisa, i-OMON, i-Labor Protection Inspectorate , i-State Standard, njl. NgoJuni, ivenkile "ii-Admetnast" nayo yatyelelwa ngabameli beSebe leengcinga zekomiti yesigqeba sedolophu ngamabango eempahla ezinemibala ebomvu nemhlophe.
Ezinye iivenkile kunye nemibutho banyanzelwe ukuba bayeke imisebenzi yabo ngokuyinxenye okanye ngokupheleleyo:
Ngenxa yeetsheki ezininzi, iinkundla, izohlwayo kunye nokuhluthwa kweemveliso, indawo yokugcina i-Brest online "Kniaź Vitaŭt" ivaliwe.
Ngaphandle kweintanethi kwaye uthathe iivenkile zeSymbal bavaliwe. Ivenkile ithengisa kuphela iimpahla zedijithali.
Ivenkile engaxhunyiwe kwi-intanethi "Moj modny kut" ayisenayo ivenkile ebonakalayo; endaweni yoko ngoku isebenza ngokukodwa njengevenkile ye-Intanethi Ukuvalwa ngokunyanzelwa YeBudźma-krama yabhengezwa.
Ivenkile yaseGomel "MROYA" ibhengeze ukuba ikufuphi kuvalwa (ngezizathu zoqoqosho).
IMIBUZO YOKUKHUNJULWA KWEMBALI KWIMBALI
Isihloko esahlukileyo esenzeka kwimeko yokunyhashwa kwamalungelo abasebenzi bezenkcubeko kunye namalungelo enkcubeko, kodwa ithatha indawo eyahlukileyo kwintetho yamagosa, sisimo sengqondo kwizihloko ezinempikiswano kwindawo yenkumbulo yembali.
Kwintetho yabameli belizwe, ezi zimo zengqondo zibekwe “njengokuthintela ukuzukiswa kobuNazi.” Ke, kwingingqi yaseMogilev, umzekelo, iqela elisebenzayo lenziwe ukuba liphande ityala lolwaphulo-mthetho ekubulaweni kwabantu baseBelarusian ngexesha leMfazwe yesibini yeHlabathi, kunye no-A.Dzermant, umphandi kwi-Institute of Philosophy ye-National Academy yezeNzululwazi zaseBelarus, iphakamisa ukuqokelela, ukubhala amaxwebhu kunye nokubonisa ezo nyani "kumaqabane" aseNtshona. Kwisifundo sokuqala, amasekela ePalamente amkela umthetho oyilwayo othintela ukubuyiselwa kwimeko yesiqhelo kobuNazi. Icandelo loMphathiswa Wezenkcubeko kwiRiphabhlikhi yaseBelarus, kunye neekomiti zolawulo zengingqi kunye neBerezovsky, babambe iintshukumo ezinikezelwe kwimisitho yenkampu yoxinaniso kwisixeko saseBereza-Kartuzskaya (ngoku eyiBereza, kwingingqi yaseBrest), nangona ngaphambili abasemagunyeni babengenamdla kule ndawo.
Ngokumalunga nolwaphulo ngaphakathi kwesi sihloko:
Nge-28 kaFebruwari, iSikolo sePolish seNtlalontle esathiywa ngegama likaRomuald Traugutt sabamba umsitho woMhla wokuKhunjulwa "kwamajoni agxothiweyo" eBrest. Abasemagunyeni bakubona oku njengeqhawe lobuNazi. Esi siganeko sikhokelele kuxinzelelo olukhulu kuluntu lwasePoland, i "Iinjongo zasePoland", kunye nomgaqo-nkqubo wenkcubeko ngokuchasene nePoland ngokubanzi. Ngenxa yoko, ngo-Matshi iinkokheli ze-Union of Poles (ezingaziwayo eBelarus) zagcinwa, kwaye kwenziwa uphando kumaziko aseHrodna, eBrest, eBaranavičy, eLida naseVaŭkavysk. Uxinzelelo kumalungu kunye nabaphembeleli be-Union of Poles kunye nePoland encinci kulo lonke iBelarus isaqhubeka. Usihlalo we-Union of Poles, u-Andżelika Borys kunye nelungu lomanyano, u-Andrzej Poczobut, bavalelwe ukususela ngoMatshi kwaye bayatshutshiswa. UMlawuli we-LLC "iSikolo sasePoland" u-Anna Paniszewa, intloko yesebe lase-Lida le "Union of Poles" u-Irena Biernacka, kunye nomlawuli wesikolo sikarhulumente kwi "Union of Poles eVolkovysk" uMaria Tiszkowska, nabo bavalelwe. Kwityala elinye elifanayo ukusukela ngeyoKwindla. Nge-2 kaJuni kwaziwa ukuba abathathu bathathwa basiwa ePoland. UAndelika Borys noAndrzej Poczobut bala ukuba bagxothwe. Bonke babonwa njengamabanjwa ezopolitiko.
Kwakhona ngo-Matshi, phantsi kwesoyikiso secala lolwaphulo-mthetho ngokuchasene nabadlali, umdlalo we "Kaddish" urhoxisiwe (bekufanele ukuba ubanjelwe nase-Centre for Urban Life eGrodno; umxholo womdlalo Ukubulawa Kwabantu Ngenkohlakalo).
Ushicilelo olunyelisayo lwabhalwa malunga neMbasa yoNcwadi yeNatallia Arsennieva nangombhali UNatallia Arsennieva-Kushel ubuqu bakhe, apho abizwa ngokuba "ngumdibanisi" owathoba iflegi emhlophe-bomvu-mhlophe; Izipapasho ezichasene namaSemite ezivela emsebenzini zibangelwa kuye. (Qaphela: Natalya Arsenyeva-Kushel - umbhali womhobe wesizwe "Mahutny Boža" obhalwe ngo-1943, ubekwa uxanduva ngokusebenza kwawo namhlanje).
UBUNKULUNKULU NENKULULEKO YOKUTHULA
Utshutshiso lolwaphulo-mthetho lomculi u-Ales Pushkin luyaqhubeka, ababhali, iincwadi, izindlu zokupapasha, imiboniso, imidlalo, iikhonsathi, umhobe "Mahutny Boža" kunye namanye amaziko enkcubeko kunye nemisebenzi iye yahlolwa.
Iimvumi kunye nabadlali beqonga banqatshiwe izatifikethi zokhenkethoKasta, J: Morse, RSP, njl., U-SHT akafumananga mvume yokudlala u "Nyana Wangaphambili" esekwe kwinoveli ngu Saša Filipienka [Sasha Filipenko], kwaye i "Che Theatre" ayinakufumana iqonga lokudlala umdlalo wabo dlala "Dziady".
The Umboniso kaMaxim Sarychau "Ndiyakwazi ukuva iintaka", ezinikezelwe eMyal Trostenets (Little Trostenets), eyona nkampu inkulu yokubulala amaNazi, yahlala ixesha elingaphantsi kweyure.
Ngosuku olulandelayo emva kokuvula, umboniso "Umatshini uyaphefumla, kodwa andenzi", Ezinikezelwe koogqirha baseBelarusian kunye nemiceli mngeni abajongane nayo kunyaka wesifo, yarhoxiswa. (Qaphela: umboniso wenzeka kwindawo yomnyhadala weMiesca).
Kwiintsuku ezimbini ngaphambi kweshedyuli, enkulu umboniso weqela lobugcisa "iPahonia"kubandakanya umsebenzi "Aqua / areli +" ngu UAles Marachkin, yavalwa (ezimbini zemizobo zanikezelwa kuNina Bahinskaja [Nina Baginskaya] kunye noRaman Bandarenka [Roman Bondarenko] - ubuntu obuyimbonakalo yombutho woqhankqalazo eBelarus).
Ngaphandle kwengcaciso, Umboniso wefoto kaViktar Barysienkaŭ "Lixesha lokukhumbula", khange kwenzeke kwimyuziyam yengingqi yaseVitebsk. ("Kubonakala ngathi kukho umntu owabona isiphithiphithi kwiifoto zeecawa ezonakalisiweyo"). Kwiintsuku ezimbalwa ngaphambili, isifundo esenziwe ngumbhali-mbali wasekuhlaleni kwithala leencwadi lommandla naye warhoxiswa.
Ngezizathu ezingaphaya Siarhiej TarasaŭUlawulo, unikezelo lwefayile yakhe incwadi "Eufrasinnya - Ofrasinnya - Aufrasinnya. Ixesha lakhe, umnqamlezo wakhe ”walibaziseka.
ukusuka Umboniso kaNadzia Buka [uNadia Buka] Asabistaja sprava ”(Ishishini lomntu) eGrodno, yeecanvases ezingama-56, ezi-6 zanyamalala ngesiquphe- njengoko kwavela, ezi zezinenhlanganisela ethile emhlophe nebomvu (Kuqhelekile ukuba ezinye zazo zapeyintwa ngaphambi kowama-2020).
Esoyika intshutshiso enokubakho kubabhali, iqela lomnyhadala wefilimu obubonwayo WATCH DOCS Belarus uhlehlise umnyhadala wabo kwi-intanethi ngokungenasiphelo. Umdlalo othi "Umvundla omhlophe, umvundla obomvu" ngumdlalo weqonga waseHomoСosmos urhoxisiwe amatyeli aliqela. Iingcinga zesikolo ziqinisekisa ukuba abafundi basiwa kwiimyuziyam zikarhulumente, hayi ezabucala. Kwibha ye-Hrodna, imenyu yahlolisiswa (bafuna ukuba ubuso namagama ancanyathiselwe), apho kwakushicilelwa imifanekiso yabantu abadumileyo baseBelarusian. I-RTBD isusile kwingqokelela yayo yomdlalo weqonga "Amazwi asuka eChernobyl" (ngokusekwe kwimisebenzi yomzuzi kaNobel uSviatlana Aleksijevič). Kwaye uSviatlana Aleksijevič namhlanje mhlawumbi ungomnye wababhali abacatshulweyo: igama lakhe lacinywa kwiphepha lomagazini, akazange avunyelwe ukukhankanywa kwiiklasi zoncwadi lwesikolo, kwaye amajelo eendaba aseburhulumenteni ayangcolisa igama lakhe kunye nodumo lweshishini.
UMGAQO-NKQUBO WENKCUBEKO KARHULUMENTE NEMALI
Sele sikhankanyile imizekelo yokophulwa ngaphakathi kwelinye lala maqela mathathu amalungelo: amalungelo oluntu kunye nezopolitiko (ukutshutshisa abo bachasayo, ukuvalelwa ngokungekho semthethweni, iimeko zokuvalelwa kumaziko avaliweyo, iingxelo ezinyelisa abanye); amalungelo enkcubeko (ukunyanzelwa, inkululeko yokuyila, ilungelo lokusebenzisa iisimboli) kunye namalungelo oqoqosho-lwentlalo (ukupheliswa okunyanzelekileyo kwemisebenzi, ukuthinjwa kwepropathi, ukudala izithintelo kulawulo ekuphunyezweni kwemisebenzi kunye nokupheliswa njengohlobo olugqithisileyo).
Olunye uhlobo lokunyhashwa ngaphakathi kwesakhelo samalungelo oqoqosho nezentlalo kukunqongophala kunye nokukhetha imeko yenkxaso yelizwe, apho abalingisi bezenkcubeko abangahlali kurhulumente baphantse babekelwa bucala kule nkqubo. Ngokungafaniyo namaziko enkcubeko alawulwa ngurhulumente, abalingisi bezenkcubeko abanga rhulumente abafumani nkxaso-mali okanye unyango olukhethwayo. Ke,
Ekupheleni kuka-Matshi, iBhunga laBaphathiswa lakhupha isigqibo esinoluhlu olulungisiweyo imibutho yoluntu, imibutho yabasebenzi kunye nemibutho, kunye neziseko ekucwangciswe kuzo ukungalingani kwe-0.1 kwinqanaba lokurenta. Nangona kunjalo, ukusukela ngo-Epreli Iindleko zokurenta indawo zonyuswe amaxesha ali-10 kwimibutho engama-93, uninzi lwayo ebengayazi kwaye ke ngoko ibingenalo ixesha lokuyilungiselela kwangaphambili. Phakathi kwemibutho yoluntu kuluhlu kukho abo imisebenzi yabo ichaphazela ngokuthe ngqo inkcubeko yelizwe: "Umbutho weThala leeNcwadi laseBelarus", "umanyano lwabayili baseBelarusian", "umanyano lwabaqambi baseBelarusian", "umanyano lwabaculi baseBelarusian", "Inkcubeko yaseBelarusian Ingxowa-mali "," Umbutho waseBelarusian weeKlabhu "UNESCO", kunye "neBelarus Dance Sport Alliance".
Amaziko olondolozo lwembali abucala bafumana ubunzima- ukuba iimyuziyam zikarhulumente ziyaxhaswa ngurhulumente, ngoko ezabucala azinankxaso kwaye basemngciphekweni wokusinda. Ke, ikhomishini ekhethekileyo kwikomiti yesigqeba sedolophu iyisusile iGrodno "iMyuziyamu yaseTsikavy" isaphulelo semali yokuhlawula irente, ke amatyala akhule amaxesha ama-6. Phakathi ku-Epreli, kwazeka ukuba imyuziyam ivaliwe. Uqeshiso lweMyuziyam yoBomi beDolophu kunye neMbali yaseHrodna nayo yonyuswa. Okwangoku, umnini uhlawula iindleko ngeendleko zakhe ukugcina imyuziyam. Amaziko olondolozo lwembali ezincitshisiweyo zobugcisa bokuyila- iGrodno Mini neMinsk “Strana mini” - nazo zijamelana nobunzima kwaye zikwinqanaba lokusinda.
Omnye wemibutho emidala kweli lizwe wahlangabezana neengxaki zemali - i "Frantsishak Skaryna Belarusian Society Society". Ngo-2020, uluntu lukwazile ukuhlawula irente yendawo kuphela ngenxa yeminikelo;
Yokuphela kwendlu yokupapasha eBelarus egxile kwimveliso yembali yendawo kunye noncwadi souvenir "Riftur" kunye nembali yengingqi yezixhobo ze-Intanethi iplanethiabelarus.by zisinda ngokulambisa;
abahlali balwa nokuvalwa kwethala leencwadi kwilali yaseLielikava kwingingqi yaseKobryn; ithala leencwadi ibikukuphela kwendawo yenkcubeko esele isezilalini.
Eli lungelo likwicandelo lamalungelo entlalo-qoqosho kwaye libandakanyiwe kumaLungelo aphezulu a-10 anyhashwa rhoqo kwisiqingatha sokuqala sika-2021.
Phantse kuyo yonke imeko yokugxothwa ebhalwe esweni, ukunyhashwa kwelungelo lokusebenza kunxulunyaniswa nentshutshiso yokuchasa kunye nokunyhashwa kwelungelo lenkululeko yokuthetha. Yayingamacandelo amabini akhokelele kwinto yokuba amanani enkcubeko, ngaphambili abonwa kwizikhundla zasekuhlaleni, babekhe bagxothwa emisebenzini okanye iimeko zenziwa ukuba babashiye.
Abasebenzi bagxothiwe / abahlaziywa:
iithiyetha: Ithiyetha yeDrama yommandla waseMogilev, iGrodno yeQonga leDrama yeNgingqi, iTheatre yeSizwe yeZifundo egama linguYanka Kupala, iBolshoi Theatre yaseBelarus, iNational Theatre yeQonga leMidlalo yeQonga ebizwa ngokuba nguMaxim Gorky;
iimyuziyam: Imyuziyam yeMbali yaseMogilev, iMyuziyam yaseMbali yeMbali kunye neLore yaseKhaya, i-House-Museum ka-Adam Mitskevich e-Novogrudok, iMyuziyam yaseBelarusian Polesie, iMyuziyam kaRhulumente yeMbali yoNcwadi lwaseBelarusian kunye nabanye;
amaziko emfundo: I-Belarusian State Academy yoBugcisa, iGrodno State College yoMculo, iYunivesithi yaseYanka Kupala yeYunivesithi yaseGrodno, iYunivesithi yasePolotsk State, iYunivesithi yaseMogilev State, iYunivesithi yaseMinsk State yeLwimi kunye nezinye iindawo.
UCALUCALULO NGOLWIMI LWEBELARUSIA
Kwakukho iimeko ezingama-33 zocalucalulo olusekwe kulwimi. Uninzi lwabo lumalunga nolwimi lwaseBelarusian (kwindawo yesibini yiPoland). Iimeko zichaphazela abantu kunye nemibutho kunye nokucalulwa kweelwimi kwinqanaba likazwelonke.
Ke, siqokelele amatyala alandelayo:
Kubomi bemihla ngemihla:
U-Adam Shpakovsky owayedla umhlala-phantsi oneminyaka engama-65 wavalelwa eMinsk, abamelwane bakhalaza ngaye "ngokucaphukisa wonke umntu ngolwimi lwakhe lwaseBelarusian."
Ngomhla we-14 kaJuni, uYulia waqhagamshelana nogqirha eMinsk District Polyclinic No. 19. Xa ebulisa, wayethetha ngesiBelarusian. Ekuphenduleni, ugqirha waqalisa ukuphakamisa ilizwi lakhe waza waxelela uJulia ukuba athethe “ulwimi oluqhelekileyo.”
Ngomhla we-13 kaMeyi, uZmitser Dashkevich, emva kokubanjwa kwezomthetho e-Zhodina kwiziko lokuvalelwa okwethutyana, wabhala kumgaqo olandelwayo e-Belarusian ukuba ufumene izinto ezihluthiweyo ngokupheleleyo kwaye akanabango. Igosa lentolongo laxelela uDashkevich ukuba abhale umthetho olandelwayo ngesiRashiya. Zmitser wala, kuba apho wafumana ngesibetho emagxeni.
UValadar Tsurpanau wafakwa kwisisele sesohlwayo iintsuku ezintathu okwesibini kuba uthetha isiBelarusian.
U-Illa Malinoŭski uthe ngexesha lokubanjwa kunye nexesha lakhe kwiSebe leMicimbi yangaphakathi yeSithili sase-Pinsk (iSebe leMicimbi yangaphakathi) nge-22 ka-Epreli, weva ukugculelwa, ukuthukwa kunye nebango lokuthetha isiRashiya.
Abavelisi abaliqela bayala ukusebenzisa ulwimi lwaseBelarusian ekupakisheni nakwiilebheli zeemveliso zabo.
Amashishini amaninzi akanayo inguqulelo yolwimi lweBelarusian kwiwebhusayithi yabo.
Abasemagunyeni benza konke okusemandleni ukuba bangayiniki mvume imisebenzi yezemfundo yeYunivesithi yaseNil Hilevič, eyunivesithi yolwimi lwaseBelarusian, eyenziwe nguMbutho weeLwimi waseBelarus kwi2018.
Iiklasi zokuthetha ngeBelarusian nazo azixhaswanga. Umzekelo, kwilali yase-Amielaniec, kwisithili saseKamianiecki, kwingingqi yaseBrest, isikolo esisemaphandleni apho kufundiswa khona eBelarusian siyavalwa. Ngokwamagosa iyavalwa ngenxa yokunqongophala kweemeko eziyimfuneko kunye nenani elincinci labafundi.
Ubunzima ngokuvula iklasi ethetha iBelarusian ngenxa yezithintelo esekwe lisebe lezemfundo. Isikolo semfundo ngokubanzi sinokungavumi ukubonelela ngemfundo ngolwimi lwaseBelarusian.
Kwimimandla yaseBelarus, uqeqesho kulwimi lwaseBelarusian luye lwaya kwinqanaba lokufundiswa kolwimi lwasemzini.
Kukho ingxaki enkulu kukusilela kweengcali zokuthetha abathetha isiBelarusian, kunye noncwadi oluneziphene kwiBelarusian.
AMANYE AMALUNGELO ENKCUBEKO
Ukongeza amatyala esohlwayo sokuhambisa, ukugcina okanye ukufunda iincwadi ezikhankanywe kwicandelo "Uncwadi", kunye nezibakala zokucalucalucalulo kulwimi lwaseBelarusian, amanye amatyala okophulwa kwamalungelo enkcubeko amaBelarusian abhalisiwe. Ukuthi ngqo:
Ukudalwa kwemiqobo ekusetyenzisweni kwelungelo lokusebenzisa imveliso yenkcubeko: ukuvalelwa ngokungenasizathu kwabafundi kwizifundo zolwimi zaseBelarusian eVaŭkavysk; ukuhambisa uhambo okanye ukuvalelwa kwabakhenkethi ePolack, eNavahrudak, eMinsk; ukubanjwa kunye nokulingwa ngokuchasene nababukeli bekonsathi eSmaliavičy; ukuvalelwa ngokungekho semthethweni nokugwetywa iiyure ezingama-24 kubanjwa abaphathi bomdlalo “Umvundla omhlophe, umvundla obomvu”.
Ulwaphulo-mthetho olunxulumene nokuthotyelwa koMthetho woKhuselo lweLifa leMveli neNkcubeko.
Ngokwahlukeneyo, iimeko ezininzi ziye zarekhodwa ngaphaya kolawulo oluphambili:
Ukujongwa ngenjongo yamanani enkcubeko kwimithombo yeendaba zikarhulumente.
Ukulwa neesimboli (ukupheliswa kweesimboli ezimhlophe ezibomvu-ezimhlophe) kunye nezenzo zobumbano zentshukumo yoqhanqalazo.
Ulawulo oluphantsi lomgaqo-nkqubo welizwe kwicandelo lenkcubeko: ubungakanani bohlahlo-lwabiwo mali lweholide kawonkewonke, ukuqeshwa kwabantu abatsha, ipropaganda, ubhaliso olunyanzelekileyo kumaphephandaba nakwabanye.
OLUNYE UKULAHLEKA KWENKCUBEKO:
Iivenkile zeencwadi zabantwana kwilizwe liphela ziyanyanzelwa ukuba zivale okanye zikwimeko enzima kakhulu yemali.
Kunye nokushiya okunyanzelekileyo kweli lizwe ukuze kuqinisekiswe ukhuseleko lomntu, nabantu aboyilayo bayalishiya ilizwe bayokuzifezekisa. Ekuqaleni kuka-2021, abadlali beholo yeqonga yeHrodna abaphulukana nemisebenzi yabo baya eLithuania. NgoJulayi 9, intsebenzo yabo yokuqala yenzeka eVilnius. Ithiyetha yobugcisa yanamhlanje yanyanzelwa ukuba ifuduke eBelarus kwaye yaqhubeka nomsebenzi wayo eKyiv. Ngomhla we-20 kaMeyi, kulapho inkulumbuso yomdlalo osekwe kwinoveli kaSaa Filipienka [Sasha Filipenko] "OwayenguNyana" wabanjwa. Ubuncinci unyaka olandelayo, ikhonsathi kunye nomqambi uJahor Zabielaŭ [Yegor Zabelov] ufudukele ePoland. Umbhali-mbali, umgqatswa kwimbali yobugcisa, kunye nomhlohli uJahihi Malikaŭ, owagxothwa eyunivesithi, waya ePoland ukuya kufundela unyaka omnye. Amatyala amaninzi alolu hlobo aqatshelwe ..
Kunzima ukukhonza ubugcisa xa "ilizwe lingenalo ixesha lemithetho", xa yonke imigaqo - yezomthetho neyabantu - iphulwe.